Ndingayisebenzisa imifanekiso kaGoogle yoMhlaba kwi-cadastre? -Geofumadas
NgoJulayi, 2013 cadastre, Google umhlaba / imephu, Ukuzonwabisa / ukuphefumlelwa
A mzuzu nokuhleka kunye nomhlobo Dutch namhlanje, anokunceda ukufana phakathi kwinkqubo ekhokelela cancer bengqondo kwezonyango nokuthandana ngeenjongo engalunganga Google Earth:
Inqanaba 1: Ukoyikisa.
Ingcali iya ebaleni xa iphendula isicelo semilinganiselo evela kumniniyo ofuna ukuthengisa; jonga ukuba kukho izakhiwo ezitsha ezingabonakaliyo kwimephu yecadastral. Emva koko uza e-ofisini kwaye abone ukuba i-orthophoto ukusuka kwiminyaka engama-40 eyadlulayo ibonisa kuphela izidiliya kuloo mda, ngesiza esikhulu kwimeko ye-rustic.
Tsalela umnxeba obesele ekhulile iminyaka engama-23, emdala ngestereoskopu exhonywe entanyeni yakhe kunye neliyirethi igugileyo ngoku eyenza oonobumba; Emva kokuzabalazela ukubeka ngaphezulu umaleko ngaphezulu kolunye, bachonga ukuba, kwimaphu kukho into esemfanekisweni.
Ngoko banqwenela ukuthabatha kwisiqhelo sonyaka ophelileyo; I-Google Earth ifike ngonyaka 2004 kwaye ibonisa i-orthophoto enemibala apho izakhiwo zakutshanje zivela khona.
Emva koko kuza isoyikiso: Ukudityaniswa kweso siqwenga akuhambelani nezo zemephu, zingaphezulu kweemitha ezingama-20 ngaphandle komhla.
-Qaphela-. Ikuxelela indawo yokuhlala. -Lezo zilungelelwano zenziwe ngabafokazi, kwaye kuphela ziyakwazi ukutshintsha.
Yazi ukuba uGoogle akanakuba angalunganga, ihambisa yonke i-cadastral layer yokutshatisa umfanekiso. Emva koko ubiza umphathi wakhe kwaye amchukumise ngokubonisa imodeli yendawo yedijithali ehambelana nomaleko wecadastral awuthumele ngaphandle kuGoogle Earth.
Ndivuyiswa yinto entsha, intloko yekhomishini ye-ejido ikubuza ukuba ukhuphe iiplani zepropathi nganye, ukuthengisa kubo bonke abamelwane ngexabiso elingcono «ukuqinisekiswa kweeplani ezihambelana neGoogle Earth» ... kwaye ngoku kwi-WGS84! ... SEO yenziwe kakuhle!
Inqanaba 2: Ukuphika
Imibini emibini kamva iGoogle ibonakala ngomfanekiso othi 2006; uchwephetha ucinga ukuba lo mfanekiso uyasandula, uqonda ukuba indawo yesakhiwo sele i-6 imitha yafuduka ngasempuma yezantsi apho ihambisa khona i-polygon, ngoku idibene eluhlaza.
Uyamangaliswa kukuba ngoku ulungelelwaniso lweemephu oziprintileyo akulunganga nokuba ziimephu zokuqala okanye umfanekiso omtsha weGoogle. Ngeli xesha iimephu ezitsalwe ngesandla zishiyiwe kwigumbi lokuhlambela elaba yindawo yokugcina izinto ukusukela mhla kwagxothwa iQuaternary.
Uloyiko lwakho luba kukukhanyela, kuba awunakho ukwamkela ukuba uGoogle akalunganga; hayi ngeli xesha. Ke ishiya ipropathi ekuthethwa ngayo kunye nesixeko sonke apho ibifuduswe khona; ilinde ingxaki ukuba izisombulule.
Sekunjalo, iyanquma ukukhupha izatifikethi ezintsha ngokusekelwe kwiinqununu ezintsha, kunye ne-offset ejikeleziweyo kwiimitha ze-6.
Inqanaba 3: Ukwamkelwa
Iminyaka emithathu kamva iGoogle ibonakala ngomfanekiso omtsha we-2009, kwaye njengoko ubonayo, iinkcukacha zicaca ngakumbi.
Qaphela ukuba isakhiwo asikho indlela esichaze ngayo.
Ingqamana indawo kunyaka ophelileyo, ngoko ke ekugqibeleni ukwamkela ukuba lucinga zabo indawo eemitha 6 .. ngoko ugqiba ukukhupha ezinye izitifiketi kunye ukubana, nangona eli xesha ngaphandle ngokusondeza.
Kuyamangalisa ukuba umfanekiso unesakhiwo esitsha esakhiwe phambi kwesiqendu, isizathu sokuthi kungani sifika kwisigqibo sokuba akukho ngcaciso echanekileyo; ukwenzela ukuba idlulise yonke i-charts yayo ye-6.47 imephu kwi-angle inclined--27 degrees.
Indoda endala ye-quaternary ihamba ngeofisi ngenkqubo yokuthenga yokuthengisa kwaye iyoyika ukubona ukuba uququzelelo lungaqhelekanga. Uzama ukwenza iingcebiso okanye ajonge imvelaphi kodwa ayincame emva kokuba ebonisiwe ngeendlela ezithile ezisekwe kulwakhiwo lobuchwephesha.
Inqanaba 4: Ukufa
Uthatha isigqibo sokulinda omnye unyaka, ukuya kowama-2010 aze aye ebaleni enze uvavanyo lwepropathi enesakhiwo esitsha emfanekisweni. Ukudlula, iqela elimangalisayo elithe intengiso yalo alihlawulwanga ukuba ikhankanye ... iisentimitha ezili-19 zokuchaneka, ngaphandle kokuhlehliswa.
Beka i-GPS kwaye ubone ukuba ulungelelwaniso lushenxisiwe, lwenza olunye uvavanyo lwe-15 kunye nemizuzu engama-25 kwaye ulungelelwaniso luqinisekisa ukuba ... Shiya iGPS ithathe ixesha elide lokufunda ngelixa uphephezelisa ixesha elide kumnini omtsha wepropathi engaphambili; Oku kuyakumema ukuba ube nekofu kwipaseji ejonge i-GPS epheka kwilanga laphakathi emini phantse imizuzu engama-40.
Ummelwane uphendula ngelithi wayithenga ipropathi kwiminyaka emithathu edlulileyo, kwaye sele eyibhalisile kwiRegistry yePropathi, ngoku efuna izicwangciso ezinolungelelwaniso oluchanekileyo. I-UTM WGS84… ilungiselelwe i-SEO!
Ngomnye ukwesaba nomnqweno wokupenda, ucela umqulu wepropati kwaye oku kubakho ukungathandabuzeki:
Waya ukubhalisa moya kunye isatifikethi ifama libonelele owayeze Ejidos in 2007; waza wamxelela ukuba uyayixabisa ukuba wenza phuculo kuba ngoku ezithile abamelwane imfuno ezimbini ndibeke akukho isizathu kuba sele imvelaphi yakutshanje ngoxa babo ngaphezu kweminyaka 30.
Thatha imilinganiselo ngaphezulu, ngaphezulu, ngokuphindaphindiweyo. Fumana isixhobo esichaneke ngakumbi, kwaye ekugqibeleni uphele uqinisekile ngobunyani:
-Izinyathelo zepropati yeGoogle zifuduswa kwii-23.87 mitha!
Post edlulileyo«Ngaphambilini Iindaba ze-3 Supergeo
Post Next Ukuzivocavoca nge-AutoCAD kuphando kusetyenziswa i-CivilCAD kunye nesitishi esipheleleyoOkulandelayo »
Iimpendulo ezi-3 "Ndingayisebenzisa imifanekiso kaGoogle yoMhlaba kwi-cadastre?"
Kufuneka balumke xa usebenzisa umthombo data zejografi zange eyenzelwe loo njongo, ingakumbi ukuxhasa lobhaliso ilizwe, ngelishwa Google Earth lizisa Sisihloko imifanekiso yesathelayithi, ilifinyeze encinane processing post, eyenza imifanekiso asondeze inxalenye ukubana xa kuthelekiswa nezinye nyaka ezahlukeneyo.
Ciriaco Saris uthi: